राज कुन्द्राबारे प्रश्न सोध्दा शिल्पाले दिइन् यस्तो जवाफ - Nagarik Today
होम » राज कुन्द्राबारे प्रश्न सोध्दा शिल्पाले दिइन् यस्तो जवाफ
धेरै पैसा कमाउने लोभमा कानुन विपरीत कर्म गर्दा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सबै गुमाएका शिल्पा शेट्टिका पति राज कुन्द्रा धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । तर, पनि उनीबारेको सवालले पिछा नछोड्दा बलिउड अभिनेत्री शिल्पा निकै हैरान बनेकी छिन् । हालै उनले एक कार्यक्रममा पति राज कुन्द्राबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ निकै खरोरुपमा दिएपछि फेरि एक पटक उनी चर्चामा छाएकी छिन् ।
राज कुन्द्राले अवैध फिल्म बनाएको आरोपमा हिरासतमा लामो समय बिताइरहँदा यता शिल्पा शेट्टि भने पारिवारिक जीवनका कारण सधैँ समाचारमा छाइरहिन् । त्यो विषयमा उनिमाथी समेत प्रहरी प्रशासनले सोधपुछ गरिरहेको थियो । त्यहाँ त उनले जवाफ दिइन नै तर सार्वजनिकरुपमा भने उनी यी विषयहरूमा खासै बोलेकी छैनन ।
यसैबिच एउटा भिडियो अहिले सार्वजनिक भएको छ । जहाँ उनलाई कुन्द्राबारे सोधिएको प्रश्नमा कडा जवाफ दिएको देख्न सकिन्छ । जसमा उनले भनेकी छिन्– के म राज कुन्द्रा हो ? म उ जस्तो देखिन्छु । म को हुँ ? उनले अगाडी थप व्याख्या गरेकी छिन्– मलाई के लाग्छ भने एक सेलिब्रेटि भइसकेपछि हामीले गुनासो गर्नु हुँदैन । न त कुनै कुरामा सफाइ नै दिँदै हिँड्नु ठिक हुन्छ । यो मेरो जिन्दगीबारेको दर्शन हो ।
actress shilpa shettyraj kundrashilpa shetty
सलमानलाई जोगाए, रिया चक्रवर्तीलाई जमानत दिलाए, अब वकिल सतिश मानशिन्देले आर्यनलाई बचाउन सक्लान् ?
चार वर्षदेखि ड्रग्स सेवन गरिरहेछन् आर्यन, सोधपुछमा खुलासा
अमिताभ बच्चनसँग समिरा रेड्डीको डेट नाइट : सोधिन्, ‘मसँग विवाह गर्नुहुन्छ ?’
ऐश्वर्यादेखि सलमान खानसम्म : जो विज्ञापनबाट बलिउड छिरे
रणबीर कपूर : प्रेममा असफल नायक
किन विग्रियो सामन्था र नागाको सम्बन्ध ?